ဖော့စဖိတ်မီးလျှံတားဆေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်ဖော့စဖိတ်မီးလျှံတားစက်ရုံ
ဖော်ပြချက်: Tricresyl ဖော့စဖိတ်သည် CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO ၏မော်လီကျူးဖော်မြူလာနှင့်အတူဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Tricresyl ဖော့စဖိတ်သည်အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်အလင်းပွင့်လင်းအဆီထွက်သောအရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနံ့မရှိ၊ တည်ငြိမ်ပြီးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပလပ်စတစ်ဖြင့်မီးလျှံနှေးခြင်း၊ ရေနံခုခံခြင်း၊ လျှပ်စစ်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာပြုပြင်ခြင်းတို့ရှိသည်။ Tricresyl ဖော့စဖိတ်သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည် benzene၊ အရက်၊ အီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ ဓာတ်သတ္တုအစရှိသည့်အော်ဂဲနစ်အရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ဒီ ...
ဖော်ပြချက်: Triisobutyl phosphate သည်မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C12H27O4P ပါသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အပူချိန်: ~ 205 c (lit. ) သိပ်သည်းဆ: ၂၀ c (လီတာ) တွင် 0.965 g / ml အပူဓာတ်တုံ့ပြန်မှုညွှန်းကိန်း - n20 / D 1.420 Flash point: 150 ° C ငွေ့ဖိအား: 0.0191mmHg 25 ° C တွင်သက်ရောက်မှု။ Tri-isobutyl စက္ကူအ ၀ တ်အထည်များ၊ ထိုးဖောက်သူ၊ ဆေးဆိုးဆေးများအဖြစ်အသုံးပြုသောဖော့စဖိတ် Triisobutyl phosphate agent နှင့် penetrant တို့ကိုသုံးသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
ဖော်ပြချက်: Isopropylated Triphenyl Phosphate သည် C27H33O4P ၏မော်လီကျူးဖော်မြူလာနှင့်အတူဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ IPPP35 သည် halogen-free phosphate flard retardant plasticizer ဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်ကြိမ်မညစ်ညူးစေပါ။ ဤဖော့စဖိတ်မျိုးကွဲများတွင် IPPP35 သည်အသင့်အတင့် viscosity နှင့် phosphorus ပါဝင်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ TheIsopropylated Triphenyl ဖော့စဖိတ်သည်အရောင်မဲ့။ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး၎င်းသည် miscibility ကောင်းမွန်သောကြောင့်မီးလျှံနှံ့။ ပလတ်စတစ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Isopropylated Triphenyl ဖော့စဖိတ် pla ...
Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated
ဖော်ပြချက်: Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရည်ဖြစ်ပြီးအေးမြ။ ခြောက်သွေ့သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားသင့်ပါသည်။ Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated ကိုအေးမြခြောက်သွေ့သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားသင့်သည်။ အလင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုရှောင်ရှားရန်, အခန်းအပူချိန်မှာတည်ငြိမ်။ triaryl ဖော့စဖိတ် isoprenylated စျေးနှုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, တရုတ်ရှိအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ triaryl ဖော့စဖိတ် isoprenylated ထုတ်လုပ်သူများအကြား, သင်အမြောက်အများဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည် ...
ဖော်ပြချက်： Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 သည်မွှေးကြိုင်သောအနံ့၊ ပွင့်လင်းမှုရှိသော ၇၈-၈၅ (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)၊ မီးပွိုင့် ၂၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူချိန် ၂၃၅-၂၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (4 mmhg)၊ ပွင့်လင်းသောညွှန်းကိန်း ၁.၅၅-၁၅၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)၊ ဘင်ဂျင်၊ အရက်၊ အီအဆင့်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော hydrolytic တည်ငြိမ်မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေနံနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသော wear ခံနိုင်မှုနှင့် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်မီးလျှံတားသောပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် PVC, polyethylene, artificial သားရေ၊f...
ဖော်ပြချက်: Molecular formula C18H15O3P. Triphenyl Phosphite သည်အခန်းအပူချိန်အထက်အရောင်၊ အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ပွင့်လင်းသောအဆီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်အနံ့ဆိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် PVC ထုတ်ကုန်များတွင် phosphorus antioxidant၊ chelating agent နှင့် stabilizer တို့၏အမျိုးမျိုးသော trialkyl phosphite ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Triphenyl Phosphite သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်အရန် antioxidant တစ်ခုဖြစ်ပြီးမီးလျှံတားဆေး plasticizer နှင့် antioxid လည်းဖြစ်သည်။
Tris (chloroethylmethyl) ဖော့စဖိတ်
ဖော်ပြချက်: အဝါရောင်အဝါရောင်အဆီပြန်အရည်။ အနည်းငယ် creamy ။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်၊ အက်သနော၊ အက်တတွန်၊ ကလိုရိုဖို၊ ကာဗွန် tetrachloride စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရေတွင်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုခြင်း။ အဓိကအားဖြင့် polyurethane အမြှေးပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် PVC မီးလျှံတားဆီးခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စသည်တို့ဓာတုဗေဒအမျှင်များနှင့် cellulose acetate ကိုမီးလျှံတားဆေးအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အအေးခံနိုင်ခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ...
ဖော်ပြချက်: Tris (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ်သည် TCEP အဖြစ်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး trichloroethyl phosphate, tris (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ်, TCEP အဖြစ်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံသေနည်း (Cl-CH2 –CH20) 3P = O နှင့်မော်လီကျူးအလေးချိန် ၂၈၅.၃၁ ရှိသည်။ သီအိုရီကလိုရင်းပါဝင်မှုမှာ ၃၇.၃% ဖြစ်ပြီးဖော့စဖရပ်၏ပါဝင်မှုမှာ ၁၀.၈% ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်အညစ်အကြေးများနှင့် ၁.၄၂၆ ၏သိပ်သည်းဆသိပ်သည်းသောအရောင်မဲ့၊ ရေခဲမှတ်သည် ၆၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောအပူချိန်မှာ ၁၉၄ ~ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်သည်။ အလင်းယိုင်အညွှန်းကိန်းသည် ၁ ဖြစ်သည်။